प्रचण्ड र सिता दाहालको बिबाह जनबादी संस्कार कि ? बुर्जुवा संस्कार ? – Rapti Khabar
Posted on September 13, 2020 September 13, 2020 Author Rapti Khabar
भदौ २८, बर्दिया । बर्दियाकी ३३ वर्षीया आशिककुमारी चौधरीले अर्कैको राम्रो फोटो राखेर नक्क’ली फेस’बुक आइडी बनाइन् । राम्री केटीको फोटो देखेपछि नवलपरासीका युवा फेसबुकमा जोडिन आइपुगे । आशिककुमारी पनि के कम, गफ गर्न थालिन् । सामान्य चिनजानबाट शुरु भएको कुराकानी मायाप्रेमसम्म पुग्यो । च्याटमात्रै होइन, फोनमा कुरा हुन थाले । दुवै जनाले लामो कुराकानी […]